Indawo yokugcina iMbali yeLifa leMveli (ngeeCawa kuthi*) - I-Airbnb
Indawo yokugcina iMbali yeLifa leMveli (ngeeCawa kuthi*)
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguGabriella And Benjamin
UGabriella And Benjamin yi-Superhost
Indawo yokugcina iLifa leMbali ingaphezulu kwendawo yokuhlala, ngamava. Inxalenye yoBhaliso lweSizwe lweeNdawo zeMbali, le propati kufuneka ibonwe. Isitudiyo sikufuphi nendlu yokuqala yezitena eyakhiwa eMonticello kwaye istudiyo ngokwaso sasikhe sasetyenziswa "njengendawo yokugcina uBhishophu". Ipropathi ejikelezileyo iquka imithi emihle, iindawo ezinengca, indawo yokucima umlilo kunye netafile yepikiniki esetyenziselwa iindwendwe. Nandipha ukuhlala ucocekile, ukhululekile kanye embindini wePaki yeSizwe/yeSizwe kunye neZikhumbuzo.
Esi studio yinxalenye yembali! Ikhaya elikufuphi nestudiyo yayilikhaya lokuqala lezitena elakhiwa eMonticello kwaye yayiyinxalenye enkulu yembali yoovulindlela ababehlala edolophini. IkwiRejistri yeSizwe yeeNdawo zeMbali kwaye yinxalenye ethandekayo yeMonticello.
IMonticello yidolophu encinci epholileyo nekhuselekileyo kwaye indawo esihlala kuyo inomgangatho ofanayo. Mhlawumbi uya kubuliswa ngamaza noncumo ngabantu abaninzi abadlulayo. Yibhloko esuka kwisitrato esikhulu ukuze ube nokufikelela ngokukhawuleza kwiindawo zokutyela kunye nezinye iivenkile edolophini.
Umbuki zindwendwe ngu- Gabriella And Benjamin
Kuya kubakho iphedi yokutshixa emnyango ukuze ukwazi ukufika kwaye uhambe ngokuthanda kwakho ngexesha lokungena / lokuphuma elichaziweyo. Sihlala sonwabile ukudibana nawe njengoko zombini iishedyuli zethu zisivumela kwaye sihoye naziphi na iimfuno zakho.
Kuya kubakho iphedi yokutshixa emnyango ukuze ukwazi ukufika kwaye uhambe ngokuthanda kwakho ngexesha lokungena / lokuphuma elichaziweyo. Sihlala sonwabile ukudibana nawe njengoko…